We.com.mm - ပဲတီပင်ပေါက်ဖောက်နည်းလေး (Video File)
ပဲတီပင်ပေါက်ဖောက်နည်းလေး (Video File)
ဒီတစ်ခါတော့ ဗဟုသုတလဲရမယ်၊ လေ့လာလို့လဲရမယ်၊ စမ်းသပ်ကြည့်လို့လဲရမယ့် ပဲတီပင်ပေါက်ဖောက်နည်းလေးကို တဆင့်ခြင်းစီတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင် လုပ်ထားတဲ့ ပဲတီပင်ပေါက်လေးကို မစားကြည့်ချင်ဘူးလား။ အရမ်းလွယ်ကူလို့ လေ့လာကြည့်ရအောင် ….
ပဲတီပင်ဖောက်တဲ့နေရာမှာ ကျောက်စည်ပိုင်း၊ ခြင်းတောင်း၊ ကော်ရေပုံး (သို့) အခြားသော ဗူးငယ်လေးများအထဲတွင်ပါ ထည့်ဖောက်လို့ရပါတယ်။
(၁) ပဲတီစေ့ကို (၈)နာရီခန့် ကြိုတင်ပြီးရေစိမ်ထားပေးပါ။ (ညမအိပ်ခင် စိမ်ထားလို့ရပါတယ်)
(၂) ဂုန်နီအိတ်နဲ့ ပဲအစေ့မကျနိုင်သော သံဇကာပိုက်ကွက်ကို ကိုယ်ထည့်ဖောက်မယ့် ကျောက်စည်ပိုင်း (သို့) ခြင်းတောင်း (သို့) အခြားသော ကော်ဗူးတို့ရဲ့ ထိပ်ဝဖြင့် အံဝင်ဂွင်ကျ တိုင်းတာပြီး အဝိုင်းသဏ္ဍန် ပိုင်းဖြတ်ပေးပါ။
(၃) ကျောက်စည်းပိုင်း၏ အောက်ခြေမှာ ရေထွက်ပေါက် ဖောက်ပေးပြီး ပုံမှာပြထားသည့်အတိုင်း စက်ဘီးတာယာကွင်းကိုခံ၍ အပေါ်မှ သံဇကာ တစ်ထပ်ခင်းပေးပါ။
(၄) ပိုင်းဖြတ်ထားသော ကော်ဇကာပိုက်ကွက်ကို သံဇကာပေါ်မှာထပ်ခင်းပေးပြီး ကော်ဇကာပိုက်ကွက်အပေါ်မှ ဂုန်နီအိတ်စ ထပ်ခင်းပေးပါ။
မိမိထည့်ဖောက်ထားသော ကျောက်စည်ပိုင်းအမြင့်ကို တိုင်းတာပြီး ပဲတီပင်ရဲ့ အမြင့်ဖြင့် တွက်ချက်၍ ၎င်းအထဲမှာ အထပ်ပေါင်းများစွာ ဝင်ဆံ့သလောက် တစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်၍ အဆင့်ဆင့် ထိုနည်းတူစွာ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
စဖောက်သည့်အချိန်မှစ၍ (၄)နာရီ တစ်ကြိမ် ရေသန့်ဖြင့်ပုံမှန်ရေဝအောင် (၂)ညအိပ် (၃)ရက်မြောက်သည့်အချိန်ထိ ဂရုတစိုက် ရေလောင်းပေးပါ။ (၂)ရက်မြောက်နေ့ (သို့) (၃)ရက်မျှကြာသောအခါ ပဲတီအပင်များရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပဲတီပင်ကို တဆင့်ခြင်း ခွာယူ၍ အမြစ်မစားချင်ပါက ဂုံနီအိတ်စ၏ နောက်ကြောဘက်မှ ဖောက်ထွက်နေသော အမြစ်များကို ဓားဖြင့် လှီးချလိုက်ပါ။ ပဲတီအပင်ရဲ့ အခွံအမည်းများကို သန့်စင်ချင်ပါက ရေအပြည့်ထည့်ထားသော စည်ပိုင်းထဲမှာ မှောက်၍ ပြောင်စင်သွားသည့်အထိ ခါချပေးလိုက်ပါ။
နမူနာ Video ကြည့်ရန် ….
ကိုယ်အလေးချိန်တိုးချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိနေတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက်
တကယ် ဝိတ်ကျချင်ရင် မနက်စာ များများစားပါ
ထူးဆန်းပြီးရူးသွပ်သွားစေတဲ့ ရေခဲမုန့်(၅) မျိုး...။